तुलसीपुरमा प्रदेश ५ कै पहिलो व्यवसायीक कालिज पालन « Farakkon
तुलसीपुरमा प्रदेश ५ कै पहिलो व्यवसायीक कालिज पालन
तुलसीपुर,फागुन २३ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ गरगरुवामा प्रदेश नं. ५ कै पहिलो व्यवसायीक कालिज पालन गरिएको छ । दाङ,बाँके र बर्दिया गरि तीन जिल्लाका युवाहरु मिलेर गत वर्षदेखि गरगरुवामा कालिजको व्यवसायीक पालन सुरु गरेका हुन ।
नौंलो व्यवसाय हुनुका साथै त्यसमा राम्रो संभावना देखेपछि उनले दाङका केसीलाई त्यो कुरा भने । त्यसपछि दाङका केसी साथिहरु सहित बाँके पुगेर कुराकानी र छलफल गरे । अनि बर्दियाका साथिहरुलाई पनि त्यो कुरा भने । सबैको कुरा मिलेपछि गतसाल फागुनमा पोखरावाट बच्चा ल्याएर उनीहले जिल्लामा पहिलो पटक जंगली पंक्षि कालिजको व्यवसायीक पालन सुरु गरेका हुन । यद्यपी यो कालिज बेल्जिएमको हो । नेपाली होइन ।
एक हजार बच्चा खरिद गर्दा २० लाख ५० हजार जति खर्च भएको बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेतका अनुसार कालिजले एक सिजनमा मात्रै अण्डा पार्ने गर्छ । त्यो भनेको माघ फागुन महिनादेखि जेठ असार सम्म हो । ६ महिना पुगेपछि कालिज बयष्क बन्छ । यो अनि खानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । भाले एक डेढ केजी र पोथी आठ सय ग्रामदेखि एक केजी सम्मको तौलको हुन्छ । खानेकुरा घाँस,मकै खान्छ । प्यारेन्ट कुखुरालाई दिने दानापनि दिन सकिन्छ ।
आफुहरुले पालेको कालिजलाई कुनै रोग नलागेको तथा कुनैपनि औषधी नदिएको बस्नेतले बताए ।
तुलसीपुर १२ ग्वारखोलाको पश्चिम छेउमै साढे दुई विगाहा जग्गा बार्षिक ८० हजार तिर्नेगरि भाडामा लिएका छन् । १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिइएको छ । जहाँ १५÷१६ हजार जति कालिज पाल्न मिल्ने क्षेत्रफल छ ।